BEAUTY Archives - Padaethar
ဒီတစ်ခါတော့ ဈေးကြီးနာမည်ကြီးတဲ့ အလှကုန်တွေ သုံးစရာမလိုဘဲ မျက်နှာအသားအရေကို သိသိသာသာ ဖြူဝင်းစေနိုင်မယ့် မှော်ဆန်ဆန် အာလူးပြုတ်နည်းလမ်းအကြောင်း မျှဝေပေးပါရစေ ။ ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ သင့်မျက်နှာကို ခဏတာသာ ဖြူဝင်းစေတာမဟုတ်ဘဲ ထာဝရဖြူစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလို့တောင် တင်စားကြပါတယ်….ပထမဆုံး အာလူးကို ဆေးကြောပြီး ပြုတ်လိုက်ပါ ။ နူးသွားပြီဆိုလျှင် အခွံခွာပြီး ကောင်းစွာ ကြိတ်ခြေပါ။ ပြီးနောက် အရောအနှောမပါသော ဒိန်ချဉ် အနည်းငယ်ကို ထည့်မွှေပါ ။ ဒိန်ချဉ်မရှိလျှင် နွားနို့ ထည့်လို့ ရပါတယ် ။ နောက်ဆုံးတွင် ပျားရည် လက်ဖက်ရည် ၁ဇွန်းနှင့် သံပုယိုရည် ၃စက်ခန့် ထပ်ထည့်မွှေလိုက်ပါ ။ အားလုံးနှံ့စပ်အောင် မွှေပြီးလျှင်တော့ မျက်နှာပေါ်သို့ သုတ်လိမ်းထားလိုက်ပါ ။ နာရီဝက်ခန့်ကြာလျှင်တော့ ရေဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်နိုင်ပါပြီ ။ အာလူးပြုတ်မှာ … Read more
ဒီ(၁၀)ချက်ထဲက (၅)ချက်လောက်နဲ့ကိုက်ညီနေရင် သင်ဟာတကယ်ချောတဲ့ကောင်မလေးပါ….
January 27, 2021 by Padaethar
ဒီ(၁၀)ချက်ထဲက (၅)ချက်လောက်နဲ့ကိုက်ညီနေရင် သင်ဟာတကယ်ချောတဲ့ကောင်မလေးပါ…. အလှအပကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စံချိန်သတ်မှတ်ထားတာချင်းမတူညီပါဘူး ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ နိုင်ငံတကာက လူတွေတော်တော်များများက လှတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စံချိန်လေးတွေပါ..။ သင်ဟာ ဒီအချက်တွေထဲက ရချက်နဲ့အထက် ကိုက်ညီနေရင်တော့ တကယ်ကိုလှပချောမောတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ..။ (၁) သင့်မှာ မျက်ခုံးမွှေးဆွဲစရာမလိုလောက်အောင် လှပပြီးထူထဲတဲ့ မျက်ခုံးမွှေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ တစ်ခါတလေရိတ်ရတာကလွဲပြီး အထူးတလည်ပြင်ဆင်ပေးစရာမလိုပါဘူး..။ (၂) သင့်ရဲ့ မျက်လုံးလေးဟာ လုံးဝစွေစောင်းမနေသလို၊ မျက်ရစ်လည်းရှိပါတယ်။ မျက်တောင်တွေက ကော့ညွတ်မနေသည့်တိုင် အကြည့်တွေက အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်..။ (၃) သင့်ရဲ့ နှာတံလေးဟာ မချွန်ရင်တောင်မှ ပြားနေတာမျိုး၊ ပွနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ နှာတံစင်းစင်းလေးနဲ့ ကြည့်ကောင်းနေသူပါ..။ (၄) သင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးဟာ နှင်းဆီပန်းလေးလိုပဲ ခပ်ထူထူလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေမှာပါ။ လူတွေကသင့်ကို နှုတ်ခမ်းလှတယ်လို့ ပြောတာကို ခဏခဏ ကြားရမှာပါ..။ (၅) သင့်ရဲ့ … Read more
October 30, 2020 by Padaethar
အလှအပကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စံချိန်သတ်မှတ်ထားတာချင်းမတူညီပါဘူး ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ နိုင်ငံတကာက လူတွေတော်တော်များများက လှတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စံချိန်လေးတွေပါ..။ သင်ဟာ ဒီအချက်တွေထဲက ရချက်နဲ့အထက် ကိုက်ညီနေရင်တော့ တကယ်ကိုလှပချောမောတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ..။ (၁) သင့်မှာ မျက်ခုံးမွှေးဆွဲစရာမလိုလောက်အောင် လှပပြီးထူထဲတဲ့ မျက်ခုံးမွှေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ တစ်ခါတလေရိတ်ရတာကလွဲပြီး အထူးတလည်ပြင်ဆင်ပေးစရာမလိုပါဘူး..။ (၂) သင့်ရဲ့ မျက်လုံးလေးဟာ လုံးဝစွေစောင်းမနေသလို၊ မျက်ရစ်လည်းရှိပါတယ်။ မျက်တောင်တွေက ကော့ညွတ်မနေသည့်တိုင် အကြည့်တွေက အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်..။ (၃) သင့်ရဲ့ နှာတံလေးဟာ မချွန်ရင်တောင်မှ ပြားနေတာမျိုး၊ ပွနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ နှာတံစင်းစင်းလေးနဲ့ ကြည့်ကောင်းနေသူပါ..။ (၄) သင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးဟာ နှင်းဆီပန်းလေးလိုပဲ ခပ်ထူထူလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေမှာပါ။ လူတွေကသင့်ကို နှုတ်ခမ်းလှတယ်လို့ ပြောတာကို ခဏခဏ ကြားရမှာပါ..။ (၅) သင့်ရဲ့ သွားလေးတွေဟာ ဖြူဖွေးပြီး ညီညာနေပါလိမ့်မယ်။ … Read more
Categories BEAUTY, ဘဝနှင့်အချစ်ရေးရာ
၇ ရကျအတှငျး အရေးအကွောငျးတှေ လြော့ပါးစမေယျ့ အလှအပထိနျးသိမျးနညျ
May 29, 2020 by Padaethar
အသကျအရှယျအိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးကို ဘယျသူမှ ဆနျ့ကငျြလို့မရပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အခြိနျမတနျခငျ အိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးကိုတော့ အသားအရထေိနျးသိမျးနညျး အစားအသောကျသတိထားစားခွငျးတှနေဲ့ တားဆီးနိုငျပါတယျ။ အသကျအရှယျရလာတာနဲ့အမြှ အရေးကွောငျးတှကေတော့ ပျေါလာတာပါပဲ။ ဒီအရေးကွောငျးတှကေို (၇) ရကျအတှငျးသကျသာစမေယျ့ ကိုးရီးယားနညျးလမျးတဈမြိုးကို ဝမြှေပေးလိုပါတယျ။ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေ သဘာဝပစ်စညျးတှမေို့ စိတျခစြှာ အသုံးပွုနိုငျပါတယျနျော။ ဒီနညျးလမျးရဲ့ ကောငျးကြိုးတှကေတော့… – ပွငျဆငျရ လှယျကူပါတယျ …။ – ပါဝငျပစ်စညျးတှကေ အကုနျအကြ သကျသာပါတယျ …။ – ခရငျက အစိုဓာတျပေးပွီး အရေးကွောငျးတှကေို ဖယျရှားပေးပါတယျ …။ – အသားအရေ အမြိုးအစားတိုငျးအတှကျ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ …။ – အသားအရပွေောငျးလဲလာတာကို ခရငျလိမျးပွီး ၇ ရကျအတှငျး သတိထားမိ လာပါလိမျ့မယျ …။ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေတော့… ကွကျဥအနှဈ တဈလုံး … Read more
May 25, 2020 by Padaethar
ဆံပင် တစ်ခါမှ မဖြောင့်ဖူးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဆံပင်က ဖြောင့်ထားတဲ့ သူတွေလို ပျော့တယ် ဆံသား ပြောင်တယ် စင်းတယ် ။ ဘာမှ မလုပ်မှတော့ ဘယ်ပျက်ဆီးမလဲ လို့တော့ မထင်နဲ့ ဆံပင် ဆေးဆိုးတာတော့ ရက်ရက်စက်စက် ဆိုးတယ် အရောင် မကြိုက်ရင် တစ်လတည်းကို ၃ ခေါက် ၄ ခေါက် လောက် ထိ အရောင် ပြောင်းတယ် ဒါတောင် မပျက်ဆီး ပါဘူး ။ အရှည်သန်တယ် ခေါင်းလေးပြီး ဇာတ်ကြော တက်တတ်လို့ အရှည် သိပ်မထားတေ့ာ့ဘူး ။ တစ်ခြားပေါင်းဆေး သိပ် သုံးစရာ လည်း မလိုပါဘူး။ ဘာမှလည်း မလိမ်းဘူး ဆိုင်မှာ လည်း ဆေးတွေနဲ့ … Read more
ချိုင်းမည်းနေတာကို ခဲဖျက်နဲ့ ဖျက်လိုက်သလို ပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်း (၄)မျိုး
May 24, 2020 by Padaethar
ချိုင်းချွေးနံ့သက်သာအောင် Roll on သုံးတာက ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ ဓာတ်မတည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေးနဲ့ရေရှည်ထိတွေ့မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ချိုင်းနေရာမှာ မည်းလာပြီး နဂိုအသားအရေလိုပြန်ဖြစ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ချိုင်းမည်းတာကို အိမ်မှာတင်ပြန်ပြုပြင်ဖို့ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နည်းလမ်း (၁) ပန်းသီးရှာလကာရည်နှစ်ဇွန်း၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှစ်ဇွန်း ဆတူရောပြီး ချိုင်းမှာ လိမ်းပေးကာခြောက်သည်အထိ ထားပေးကာ ရေပြပန်ဆေးချပေးလိုက်ပါ။ တစ်ပတ်မှာ ၃ကြိမ် လုပ်ပေးသွားရုံနဲ့ တစ်လလောက်ကြာရင် နဂိုအသားအရောင်အတိုင်းပြန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ နည်းလမ်း (၂) နွားနို့တစ်ဇွန်း၊ နနွင်းတစ်ဇွန်း၊ ပျားရည်တစ်ဇွန်းတို့ကိုရောမွှေပြီး ချိုင်းမှာ ထူထူလေးလိမ်းပေးကာ ခြောက်တဲ့အထိ ထားပြီး ရေပြန်ဆေးချပေးပါ။ တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်၊ တစ်လလောက် လုပ်ပေးရင် ချိုင်းပြန်ဖြူလာမှာပါ။ နည်းလမ်း (၃) သကြား ၃ ဇွန်း၊ သံလွင်ဆီ … Read more
May 23, 2020 by Padaethar
ဆံပင်တွေကျွတ် လို့ စိတ်ညစ် နေရသူတွေ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံ လည်း အများကြီး ကုန် စရာ မလိုတဲ့ နည်းေ လးကို ဝေမျှ ပေးချင်ပါတယ်။ ဆံပင်တွေ ကျွတ်၊ဆံပင်ပါးလာတာတွေကို တော့ ကြက်ဥ လေးကို သုံး ပြီး ဖြေရှင်းလို့ ရပါတယ်။သဘာဝ နည်းလမ်းကိုတော့ ပုံမှန် သုံးပေးပါ။ တစ်လ ၊နှစ်လ အတွင်းမှာပဲ ရ လဒ် ကောင်း ကို ခံစား ရမှာပါ။ အရမ်းကို လွယ်ပါတယ်။ ကြက်ဥ မှာတော့ ဆံပင် အတွက် အာဟာရ ဖြစ်စေတဲ့ ပရိုတင်းနဲ့ အာဟာရ ဓါတ် တွေ အများကြီး ပါရှိပါတယ်။ဆံပင် ကို ကျန်းမာသန်စွမ်း စေတဲ့ အပြင် ဆံပင် … Read more